Facebook ရဲ့ Live Streaming Policy အသစ်။ - Myanmar End User
By Win Thet Oo May 15, 2019 805 views
File photo dated 03/11/15 ofawoman using her phone underaFacebook logo. The social networking giant will restrict people who have broken certain rules from using its Live streaming feature, in response to the mosque terror attack in Christchurch, New Zealand.
်မကြာသေးမီကမှ Facebook က Live video တိုက်ရိုက်လွှင့်တဲ့ streamer တွေကို policy အသစ် တစ်ရပ်ထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။ ဂိမ်းဆော့တာ လွှင့်တဲ့ streamer တွေရော online shopping မှာ တိုက်ရိုက်လွှင့်တဲ့ streamer တွေအားလုံးသိထားသင့်ပါတယ်။ ဒါကဘာလဲဆိုတော့ Live လွှင့်ပြီး အကြမ်းဖက် သတ်ဖြတ်မှုတွေလုပ်တာမျိုးတွေကို Facebook က လုံး၀ခွင့်မပြုပဲ live လွှင့်တဲ့လူကို Facebook သုံးခွင့်အပြီးပိတ်ပင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ အကြမ်းဖက်မှုလို့ ဆိုရာမှာ လူအချင်းချင်းဖြစ်စေ၊ တိရစ္ဆာန်တွေကို ညှင်းပန်း နှိပ်စက်တာမျိုးတွေ ပါဝင်ပါတယ်။ ဒီလိုမျိုး အကြမ်းဖက်လုပ်တာကို Live လွှင့်ရင်းနဲ့ ဝင်ကြည့်တဲ့လူဖြစ်ဖြစ် Video ကို အများသူငှာ ထိတ်လန့်အောင် share လုပ်တာဖြစ်ဖြစ် လုပ်တဲ့လူကိုပါ Facebook က ban မယ်လို့ အသိပေးကြေညာခဲ့ပါတယ်။
March လမှာ ဖြစ်ခဲ့တဲ့ New Zealand က Church ကျောင်း အကြမ်းဖက်မှုမှာ အကြမ်းဖက်သမားက live လွှင့်ပြီး အကြမ်းဖက်မှုလုပ်ခဲ့တာကို အားလုံးသိကြမှာပါ။ ဒီ live လွှင့်ပြီး အကြမ်းဖက်မှုကို လူတွေက မျှဝေမှုတွေလုပ်ကြပါတယ်။ တစ်ချို့က အကျိုးမရှိ လူမှုကွန်ရက်မှာ ပွအောင် တင်ပြီး share ကြပါတယ်။ Facebook Team က စီစစ်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့ video ပေါင်း ၉၀၀ ကျော်ပြန့်နှံ့ နေတာကို တွေ့ခဲ့ရပါတယ်။ အလားတူ ဒီလိုအကြမ်းဖက်မှုတွေ မပျံ့နှံ့အောင် အကြမ်းဖက်မှုပုံစံမျိုး video တွေ့တာနဲ့ Fb က ပယ်ဖျက်ပြီး လုပ်စရာရှိတာ လုပ်ဆောင်သွားမယ်လို့ မီဒီယာတွေကို ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
အကြမ်းဖက်မှု တစ်စုံတစ်ရာပါတဲ့ video တွေ၊ ဓါတ်ပုံတွေကို share တာမျိုးတွေ၊ ပါဝင်ပတ်သတ်မှုတွေလုပ်တာမျိုးကို မလုပ်ရန် မြန်မာပြည်က မိဘပြည်သူများသိအောင် ရေးသားတင်ပြလိုက်ပါတယ်။